Showing १०१-११० of १७२ items.
सङ्गीतकी अथक योद्धा मथुरा
धरान/ मथुरा प्रधान श्रेष्ठको छाया युवापुस्ताको मानसपटलमा सायदै होला । तर, जब ‘यो जीवनको परिधिभित्र, बाँधिएर कति बाँचिदिनु’ बोलको राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत गीत गुञ्जिन्छ, ६० का दशकसम्मका युवापुस्तालाई मथुरा श्रेष्ठ चिनाइरहनु पर्दैन । २०३९ सालमा रेडियो नेपालमा रेकर्ड भएको थियो । हो, यही गीतकी स्रष्टा जो हाल वेलायतमा बसिरहेकी छन् । गायिका मथुरालाई कालजयी बनाउने गीतहरूमध्येको यो एउटा गीतले पनि त्यो बेला मथुरालाई चिनाइरह्यो । कलिलै उमेरमा सङ्गीतको नसाले उनलाई चाप्यो । पाँचथरको यासोकमा जन्मिएकी मथुरालाई सङ्गीतमा डोर्याउनमा भने काका विष्णुकुमार प्रधान जो त्यो बेलाका प्रख्यात व्यक्ति थिए
प्रकाशित मितिः मंसिर ४, २०७६
६१६ पटक पढिएको
‘नेकपालाई मुलुकबाटै विस्थापित गर्ने कुरा हाँस्यास्पद’
– धरानको चुनावी माहौललाई कसरी नियाली रहनु भएको छ ?समग्रतामा धरानेको चुनावी माहौल सूर्यको पक्षमा देखिएको छ । हामी अलिकति उम्मेदवार निर्णय गर्न ढिला भयौं । तथापि अहिले चुनावी अभियान द्रुत गतिमा बढेको छ । विगतको मतभन्दा राम्रो मार्जिनले लिड गर्दैैछौं । यो निर्वाचनमा सवै सेक्टर परिचालित छन् । महिला, बुद्धिजीवी, जेष्ठ नागरिक, व्यापारी व्यवसायी परिचालित छन्, उत्साहित छन् । विजय सुनिश्चित छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ, यो माहौलले । – नेकपाका उम्मेदवार प्रकाश राईले धरानमा जित्ने आधार के होला ?जित्नुपर्ने आधार अनेक छन् । पहिलो, धरानको विकास निर्माणमा आजको धरान बनाउन कम्युनिष्ष्ट पार्टीको
प्रकाशित मितिः मंसिर ३, २०७६
१,६३५ पटक पढिएको
जीवनमरणको दोसाँधमा चेम्जोङ
यासोक/ धन कमाउने लोभमा छिमेकी देश भारतको मेघालय पुगेका पाँचथर कुम्मायक गाउँपालिका ५ का ईश्वर चेम्जोङ यतिबेला जीवन मरणको दोसाँधमा छन् । पारिवारिक आर्थिक अवस्था न्यून भएका उनी धन कमाउनैका लागि भनेर मेघालयस्थित कोइला खानीमा पुगे । तर, कोइला खानीमा भएको दुर्घटनाका कारण अहिले जीवनमरणको दोसाँधमा दिन काटिरहेका हुन् । उनी काम गर्दागर्दै खानी माथिको ढिस्को खसरे ढाडको मेरुदण्ड भाँच्चिएको थियो । जसले गर्दा उनको शरीरको आधा भाग नै नचल्ने भएपछि परिवार सहारामा बाँच्न बाध्य छन् । उनको कष्टकर जीवन देखेका केहीले गरेको सानो तिनो सहयोगको भरमा नै दैनिकी चलिरहेको छ । तर, त्यो उनको दैनिक जीवनको लागि पर्याप्त छैन ।
५८८ पटक पढिएको
आहा ! तमोरमा -याप्टिङ
ताप्लेजुङ / ‘तमोर नदिमा ¥याप्टिङ (जलयात्रा) गर्दा अति नै रमाइलो हुन्छ । कहिले काहीँ डर पनि लाग्छ, यस्तोमा नै रमाउने हो ।’ २४ जनाको विदेशीहरुलाई नेतृत्व गरेर आएका इटालियन नागरिक डेभिडले तमोर नदिमा ¥याप्टिङ गर्नुअघि अग्रेजी लवजमा भने । पछिल्लो समय उनीसहित अल्टिमेट रिभर कम्पनीमार्फत स्पेन, फ्रान्स, इटालीका नागरिकले आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका र मेरिङदेन गाउँपालिकाको सिमाना रहेको तमोर दोभानवाट ¥याप्टिङ सुरु गरेका छन् । ¥याप्टिङको सिजन सुरु भएसँगै यस नदिमा विभिन्न कम्पनीले करिव ५० जना विदेशीलाई ¥याप्टिङ गराएका छन् । दोभानवाट सुरु भएको जलयात्रा कावेली दोभान, माँझीट
प्रकाशित मितिः मंसिर १, २०७६
प्रकाशित मितिः कार्तिक २४, २०७६
५८३ पटक पढिएको
तस्विरमा विराटनगरकाे छठ
विराटनगर / पवित्र छठ पर्वको रुपमा मनाइने यस वर्षको छठको मुख्य दिन ब्रतालुहरूले शनिबार अस्ताउँदो सूर्यलाइ अर्घ दिएका छन् । भोली उदाउँदो बिहानी सर्यूलाई अर्घ दिएर यो पर्व समापन हुने गर्दछ । विराटनगरको सिंघिया, केसलीया खोला, यहाँ रहेको नहरलगायतको नदीहरुमा हजारौं श्रद्धालु अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ प्रदान गरे । यस वर्ष मौसम राम्रो भएको कारणले पूजा स्थलमा श्रद्धालु तथा भत्तजनहरुको घुइचो देखियो । निराहार व्रत बसेका ब्रतालुहरुले अस्ताउँदै गरेको सूर्यको पूजा गरेका छन् । पर्वको दोश्रो दिन व्रतालुहरु दिनभरि उपवासबसेका थिए । निराहार व्रत बसेका ब्रतालुहरूले अस्ताउँदै गरेको सूर्यको पूजा गरेका थिए ।
प्रकाशित मितिः कार्तिक १६, २०७६
५१६ पटक पढिएको
न्हुँ दँया भिंतुनामा’ विराटनगरमा भव्य मोटरसाइकल र्याली (फोटो फिचर)
विराटनगर । नेपाल सम्वत ११४० (न्हुँ दँया भिंतुना) को आगमनमा विराटनगरमा भव्य र्याली निकालिएको छ । झिःपुच विराटनगरको आयोजनामा विराटनगरमा आज सोमबार भव्य मोटसाइकल र्याली निकालिएको हो । विराटनगरस्थित झिःपुच भवनबाट विहान साढे आठ बजे प्रसादको रूपमा अण्डा र ‘सगुन’ पिएर ट्राफिक चौक हुदै महानगर परिक्रामा गरि सोही ठाउँमा आएर विभिन्न कार्यक्रम हुनेछ । र्यालीमा झिः पुचका पदाधिकारी, नेवार सामुदायका किशोर, किशोरीहरू आफ्नो जातिय पहिरनमा सजिएर सहभागि भएका छन् । र्यालीपछि झिःपुच भवनमा २६ औं वार्षिक साधरणसभाबाट नयाँ निर्वाचित भएका पदाधिकारीहरूको पदस्थापन कार्यक्रममा रहेको छ । यस्तै समाजको लागि योगदा
प्रकाशित मितिः कार्तिक ११, २०७६
६२६ पटक पढिएको
धनकुटाकाे स्याउलेबाट बजार आउने तैयारीमा मखमली फूल
धनकुटा नगरपालिका वडा नं.३ स्याउलेका स्थानिय किसान दिनेश घिमिरेले आफ्नो ४ रोपनी बारीमा नेपालीहरुको दोश्रो ठूलो पर्व तिहारको रमझममा झिलिमिली बनाउन लगाएको मखमली फूल बिक्रिको तयारीमा मुठा बनाउँदै । बारीमै मुठाको ६० रुपयाँले मखमली फुल विक्ने गरेको छ । सन्तवीर लामा /ब्लाष्ट
प्रकाशित मितिः कार्तिक १०, २०७६
१,३५३ पटक पढिएको
शुरु भयाे धरानमा तिहार (फाेटाेफिचर)
तिहार नजिकिदै जाँदा धरानका बजार क्षाेत्रहरूमा तिहारकाे राैनक छाएकाे छ । अघिल्लाे वर्षा भन्दा अगाडी रहेकाे यस वर्षकाे तिहारमा यहाँकमा व्यापारीहरू तिहारकाे मैसमी व्यापारकालागी उत्साहीत भएकाे देखीन्छ । विषेश गरी फलफुल र तरकारी व्यावसाय गरीरहेका व्यापारीहरू यतीबेला तिहारकाे मैसमी व्यापारमा लागेका छन् । तस्विरमा धरानकाे तिहार राैनक ।
प्रकाशित मितिः कार्तिक ७, २०७६
१,२७८ पटक पढिएको
तस्विरहरूः डम्वर कार्की
सगरमाथासहितका सातवटा हिमशृङ्खला चौदण्डी गढीबाट दृश्यवलोकन
उदयपुर / चौदण्डी नगरपालिकाको पहाडी क्षेत्रमास्थित ऐतिहासिक चौदण्डीगढीमा भ्यूटावर निर्माण भएपछि दैनिक पर्यटकको वृद्धि भएको छ ।अहिले दैनिक भ्यूटावर चढ्न र मनोरम दृश्यवलोकनका लागि दैनिक दुईसयभन्दा बढी पर्यटक आउने गरेको चौदण्डी पर्यटन विकास समितिका संयोजक रोहित तामाङ बताएले जानकारी दिए । उनकानुसार उदयपुर जिल्ला बाहेक सुनसरी, झापा, मोरङ, सिरहा, सप्तरी, धनुषा, काठमाडौं चितवन तथा भारतको बिहार र सिलीगुढी पश्चिम बङ्गालबाटसमेत पर्यटक आउने गरेका छन् । पर्यटकको सङ्ख्या वृद्धि हुन थालेपछि त्यहाँको आन्तरिक पर्यटनको विकासमा निकै मद्दत पुगेको नगरप्रमुख खगेन्द्र राई बताए । उनकानुसार पूर्वकै ऐतिहा